Jilaaga caanka ah ee Irrfan Khan oo u dhintay xanuun naadir ah - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaJilaaga caanka ah ee Irrfan Khan oo u dhintay xanuun naadir ah
New Delhi (JO) – Jillaagii Bollywood Irrfan Khan, ee caalamka looga yaqaano Slumdog Millionaire iyo Jurassic World – oo ah doorkiisii uu ka ciyaaray aflaantaas – ayaa dhintay isagoo 53 sano jir ahaa.
Sannadkii 2018, jilaaga wuxuu shaaca ka qaaday inuu ku dhacay xanuunka endocrine tumour – oo ah in unugyada difaaca jirka ay weeraraan xididdada dhiigga – kaas oo ah cudur naadir ka ah dunida.
“Wuxuu lahaa xirfad aan caadi ahayn… saaxiib qaali ah oo naxariis badan… qof caan ku ahaa kaalintiisa aflaanta caalamiga ah… da’ yar ayuu ku dhintay … taas oo sababaysa kaalin wayn in ay bannaanaato,” ayuu qoray Amitabh Bachchan oo filim ay isla jileen.
Jilaaga kale, Raveena Tandon, wuxuu bartiisa Twitterka ku qoray inuu ahaa “la-jilaa cajiib ah, jilaa aad u wanaagsan iyo qof aad u qalbi fiican”.
Sannadkii 2013, wuxuu ku guuleystay Abaalmarinta Aflaanta ee hindiya, taas oo uu ku muteystay kaalintii uu ku lahaa filimka Paan Singh Tomar, – Ciyaaryahankii aad u fiicnaa ee noqday burcadka.
Waxay isku xirnaayeen Mira Nair – oo xirfaddiisa jilliinka ka soo heshay iskuulkii uu dhigayay ka dibna u dhiibtay filimkii Salaam Bombay. Sidoo kale wuxuu qeyb ka ahaa majaajiladii Namesake ee 2016-kii iyo filimka New York, I Love You ee 2010.
Michael Winterbottom filimkii uu soo saaray ee A Mighty Heart wuxuu ka ahaa Taliye Boolis oo Pakistan u dhashay, halka Wes Anderson uu door yar ka siiyay filimkii The Darjeeling – si uu ugu yaraan ula shaqeeyo.
Warqad ay baahisay shirkaddiisa ee lagu xaqiijiyay geeridiisa waxaa lagu sheegay: “Isagoo ay ku hareereysan yihiin jaceyl, qoyskiisa oo uu aad u daryeeli jiray, ayuu geeriyooday, wuxuuna ka tagay sharaf wayn ee uu hantay.”